साइलेन्ट हर्ट-अट्याकले जो-कोहीलाई पनि मार्न सक्छ, यस्ता छन् ५ संकेत (यसरी बच्न सकिन्छ) – Satya Samachar
Home/ स्वास्थ्य/जीबन शैली/साइलेन्ट हर्ट-अट्याकले जो-कोहीलाई पनि मार्न सक्छ, यस्ता छन् ५ संकेत (यसरी बच्न सकिन्छ)
फागुन १३, काठमाडौँ | मृत्युका धेरै कारण छन् । केहीबेर अघिसम्म स्वस्थ भनिएको मानिस केहीबेर पछी अकास्मात मरेको खबर पाईन्छ भने कस्तो होला ? कुनै दुर्घटनाको कारण हुने मृत्युको कुरा फरक छ, तर आफ्नै स्वास्थ्य र आफ्नै सरिरको कुनै अंगले एक्कासि काम गर्न छाडेपछी हुने मृत्युलाई कसले रोक्न सक्ला ? यस्तै स्थिति हो हर्ट-अट्याक । त्यसमा पनि साइलेन्ट हर्ट-अट्याक खतरनाक छ ।
हर्ट-अट्याकका कारण मृत्यु हुनेहरु धेरै छन् तर पछिल्लो समय चर्चामा रहेका दुई हर्ट-अट्याकका घटनाले आम मानिसहरुमा ठूलो डर पैदा गरिदिएको छ । सनिबार मात्र भारतीय अभिनेत्री श्रीदेवीको साइलेन्ट हर्ट-अट्याकको कारण कसैले नसोचेको हर्ट-अट्याक भयो ।
सनिबार श्रीदेवीको हर्ट-अट्याकको कारण मृत्यु भयो । उनको साइलेन्ट हर्ट-अट्याकको कारण मृत्यु भएको हो । यस्तो खाले हर्ट-अट्याक ४५% मा हुने गरेको छ । यस्तो हर्ट-अट्याक महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी हुने गरेको छ । एसियन हर्ट-इन्स्टीट्यूट, मुम्बईका मेडिकल अफेयर्स तथा क्रिटिकल केयरका डाईरेक्टर डा. विजय डी. सिल्वाको अनुसार एकपटक पनि मुटुसम्बन्धि रोग नलागेकाहरुलाई पनि यस्तो हर्ट-अट्याक हुने सम्भावना हुन्छ ।
साइलेन्ट हर्ट-अट्याकको ५ लक्षणहरु: १. ग्यास्ट्रिक समस्या, पेटमा खराबी हुनु.२. बिना कारण अल्छीपन वा कमजोरी महसुस हुनु.३. थोरै काम गर्दा पनि थकाई लाग्नु.४. अचानक चिसो पसीना आउनु, गला वा पाखुरा दुख्नु.५. पटक-पटक स्वास फुल्ने (स्वा-स्वा बढी हुनु), स्वास प्रस्वासमा समस्या हुनु
साइलेन्ट हर्ट-अट्याकका ५ कारणहरु: १. धेरै ओएली (तेल), चिल्ला पदार्थ र प्रोसेस्ड फूड सेवन गर्नु.२. सारीरिक कसरत नगर्नु वा काम नगरी दिन व्यतित गर्नु.३. रक्सि तथा धुम्रपान सेवन गर्नु.४. डाइभिटीज र मोटोपन हुनु.५. कामको चाप बढ्नु तथा तनाव बढी हुनु.
साइलेन्ट हर्ट-अट्याकबाट बच्ने ५ उपायहरु: – १. डाइटमा सलाद, तरकारीहरु ज्यादा सेवन गर्ने ।२. निरन्तर हिड्ने, सरिरलाई चलायमान बनाउने जस्ता काम गर्ने, सारीरिक व्यायाम गर्ने, योगहरु गर्ने ।३. धुम्रपान तथा मध्यपानबाट टाढा रहने ।४. खुसि रहने । तनाबमा नरहने ।
स्रोत :साझा सबाल
जाडोको बेला विहानीपख हृदयघात बढी हुनुको कारण के हो ? जोगिन के गर्ने ?
के कारणले लाग्छ सबैभन्दा घाताक रोग क्यान्सर ? यस्ता छन जोगिने उपाय – हेर्नुहोस भिडियो सहित र सक्दो सेयर गर्नुहोस ?
यौन संबन्धको बारेमा केहि अनौठा तथ्य :जानकारी मुलक